Dawladda federaalka oo ballan-qaaday in ay bannaanka u dhigayaan dadka qaba dhaawacyadii halista eek u waxyeeloobay qaraxii Muqdisho. – Radio Daljir
Dawladda federaalka oo ballan-qaaday in ay bannaanka u dhigayaan dadka qaba dhaawacyadii halista eek u waxyeeloobay qaraxii Muqdisho.
Muqdisho, Oct 05 ? Dawladda federaalka KMG ah ee Soomaaliya ayaa wadda qorshayaal lagu daryeelayo dadkii ku waxyeeloobay qaraxii shalay lala beegsaday xaruntii Hargaha iyo Saamaha ee magaalada Muqdisho halkaasi oo wasaarado dawladeed oo badani ku yaalliin.
Dawladdu, waxay gacan gargaar oo dawooyin u badan ku caawisay isbitaallada magaalada Muqdisho gaar ahaanna kuwii la dhigay dhaawacyadii shalay oo badankoodu la tilmaamayo in ay qabaan dhaawacyo halis ah.
Dawladdu, waxay dhinaca kale ballan-qaaday dayeel caafimaad oo bannaanka ah in loo fidin doono dhammaan dadka ay soo gaareen dhaawacyadu, gaar ahaan kuwa aan waxba looga qaban karin dalka gudihiisa, waxaana ballan-qaadkaasi uu yimid kaddib markii m/weynaha dawladda federaalku saaka booqday qaar ka mid isbbitaallada magaalada Muqdisho ee ay yaalliin dhaawacyadu.
M/weynaha, oo booqashadiisa kaddib shir jaraa?id oo uu ku qabtay magaalada Muqdisho waxaa uu ku sheegay in ay go?aansadeen dawladda ahaan in ay bannaanka u qaadaan dhaawacyada halis ah, waxaana uu sheegay beesha caalamka in ay ka codsanayaan in gacan laga siiyo arrintaasi.
Md. Shariif, waxaa uu mar kale qaraxii shalay uu ku tilmaamay wax laga xumaado, ayna fuliyeen arxan-daranayaal ka macaasha dhiigga muslimka.
Qaraxaasi Mudisho ee shalay oo ahaa mid is-miidaamin ah loona adeegsaday gaari kuwa xamuulka ah oo laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ayaa lagu tilmaamay in uu ahaa midkii ugu weynaa ee Muqdisho ka dhaca, waxaana uu dhinaca kale noqday midkii ugu khasaaraha badnaa, waxaana sheegtay in ay ka dambeeyeen ururka Al-shabaab.